गाउँपालिका अध्यक्षलाई खुल्लापत्र 'अध्यक्ष ज्यु, नमस्कार !...' | दर्पण दैनिक
गाउँपालिका अध्यक्षलाई खुल्लापत्र 'अध्यक्ष ज्यु, नमस्कार !...'
प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख ३० गते ११:१२
कुसल हुनुहुन्छ भन्ने आशा, अपेक्षा र विश्वास लिएको छु । सप्रेम आदरभाव व्यक्त गर्दै कुसलताको कामना समेत गर्दछु ।
आज आफूलाई एक जिम्मेवार नागरिक महसुस गरि मनमा लागेका केही कुरा र विषयवस्तुमा प्रवेश गरि खुल्ला पत्र लेख्ने जमर्को गर्दैछु । ‘कुरा खस्रा मिठा’ भने जस्तै, मैले यो खुल्ला पत्र लेख्दा केही अप्ठ्यारो महसुस हुनसक्छ तर, अन्तत : केही फलदायी र प्रभावकारी नै हुन्छ होला भन्ने मनमा लागेको छ ।
मैले प्रायःजसो सुनेको कुरा राजनीति एक समाज सेवा हो । तपाईंले जीवनमा लामो समय राजनीतिक अनुभव बटुल्नु भएको छ । राजनीतिमा दु:ख, मेहनत, त्याग तपस्या र संघर्ष चाहिँन्छ । आज त्यही योगदानको फलस्वरूप तपाईंको राजनीतिक यात्रा सफल गन्तव्यमा पुगेको छ । राजनीतिका बारेमा मैले धेरै कुरा लेख्नु,भन्नु त्यति सान्दर्भिक र तात्पर्य नहोला । किनकि, मैले तपाईंलाई धेरै सम्झाइ बुझाइ राख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । मैले बुझाउन खोज्नु भनेको ‘इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान’ जस्तै हो भन्ने लाग्छ ।
तरपनि, यो समाज र देशको एक जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले मेरो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकार प्रमुख जनताप्रति जवाफदेही, काम, कर्तव्यप्रति उदासिनता, आफ्ना कार्यशैली र व्यवहारप्रति गैर जिम्मेवार रहेकोे विभिन्न माध्यमबाट जनस्तरमा गुनासो र प्रतिक्रिया देखिन थालेपछि सरकारलाई सचेत गराउन एक खुल्ला पत्र लेख्दैछु ।
अध्यक्ष ज्यु, हिजोका दिनमा जनताले ठूलो आशा, अपेक्षा र भरोसा बोकेर, एक कुसल नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्न सक्ने क्षमता महसुस गरेर समाज, देश र जनताको सेवा गर्न जनताले म्यान्डेट दिएर त्यो जिम्मेवारी तहमा पठाएका हुन् । त्यसैले त्यसको अवमूल्यांकन हुनु हुँदैन । जनताको विश्वास र भरोसा गुम्न नदिनुहोस् । नेतृत्वमा इमानदारीता पनि चाहिन्छ । समाजको विकास र जनताको हितमा काम गर्दै जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ ।
वर्षौंपछि मुलुकमा राज्यव्यवस्था परिवर्तन भयो । वर्षौं लामो समयसम्म देश द्वन्द्वको चपेटामा परेपछि विकासका पूर्वाधार र भौतिक संरचनाहरु तहसनहस भए । अहिले शान्ति स्थापनापछि देशमा आएको आमूल परिवर्तनले अब हाम्रो देश नेपालमा विकास निर्माण कार्यले छिटोभन्दा छिटो तीव्र गति लिन्छ भन्नेमा जनताको आशा र अपेक्षा थियो । पुरानो एकात्मक, केन्द्रिकृत शासन पद्धति, राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो संघर्ष भयो । त्यही त्याग, तपस्या, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबै आम नागरिकको नैसर्गिक जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । द्वन्द्वकालिन जनयुद्धका पीडा नागरिकले अझै बिर्सिएका छैनन् र थुप्रै नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण संघर्षले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था आयो । अहिले तीन तहमा सरकार छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालन हिजोको भन्दा फरक छ । अहिले तीन तहमा सरकार हुँदा बजेटको आकार, स्वरुप र कार्यान्वयनको पाटो फरक छ । बजेटको एक ठूलो हिस्सा अहिले स्थानीय तहमा आउने गरेको छ । तर, धेरैले लेख्ने र भन्ने गरेको सुनेको छु । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, अवस्था परिवर्तन भएन । के साँच्चिकै यही हो त ? अध्यक्ष ज्यु ।
स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका विकास निर्माणकार्य कतिसम्म दीर्घकालीन छन् । यी संरचनाहरु निर्माण भए जनताले प्रत्यक्ष रूपमा के कति फाइदा र लाभ लिन सक्छन् ? जनताको जनजीविकाको सवालमा के कति परिवर्तन हुनसक्छ । रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न के कति प्रयास र कामहरु भए ? कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले कसरी विकास र प्रबर्द्धन गरिरहेको छ ? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच राख्न र मनन गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारले बजेट भासणमा बढी महत्वकांक्षी योजना, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । लगानी प्रबर्द्धनका कार्यहरु के कसरी भएको छ ? विनियोजित बजेटको लक्ष्य प्राप्ति र प्रतिफल केकति भयो ? भन्ने कुरा प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन सम्बन्धिको नीति, कानून तथा मापदण्ड तयार गरि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको परिचालन र उपयोग कसरी भइरहेको छ ? सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको पहिचान गरि समुचित व्यवस्थापन गरौं । नदिजन्य पदार्थ ढुंगा, बालुवा र बन जंगलको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? यी वस्तुको सेवा शुल्क, दस्तुर निर्धारण, दण्ड जरिवाना र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संकलन, पर्यटन शुल्क र नियमन गरियोस् ।
राजस्व संकलन र कर व्यवस्थापन गरि आम्दानीका स्रोतमा ध्यान दिनुपर्यो । यो सबैको चाँसो कुरा हो । स्थानीय बजार व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण, व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, खारेजी, अनुगमन र नियमनमा ध्यान दिनुहोस् । ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुविधा वडा कार्यालय मार्फत गाउँघरमै उपलब्ध गराइयोस् । गाउँपालिकामा साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ? साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, व्यवसायिक सीपमूलक तालीम, महिलालाई पेसागत सीप विकास, गरीब तथा विपन्न परिवारलाई जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याइयोस् । स्थानीय स्तरमा ग्रामीण सडकको स्तरउन्नति, कालोपत्रे, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ र नदि तटबन्धनको दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गरि काम गरियोस् । बहुवर्षीय बजेट योजना ल्याइयोस् ।
अध्यक्ष ज्यु, तपाईंले लिएको नमूना गाउँपालिका निर्माणको लक्ष्य र एजेन्डालाई सार्थक तुल्याउन चाहिने सारभूत कुराहरु केके हुन् ? ती पूर्वाधार सूचकहरु केके हुन् ? अध्ययन र विश्लेषण गर्नु भएको त होला, नभए गर्न जरुरी छ । सुनेको थिए सुरुका केही वर्षमा गाउँपालिकामा आर्थिक महालेखा परीक्षण भएपछि २७ लाखसम्म बेरुजु आएको थियो । यो कतिसम्म यथार्थ हो । त्यो चाहिँ पालिकालाई नै थाहा होला । यसको कारण समयमै कार्य सम्पादन नहुनु र सम्पन्न भएका योजनाको हिसाब फरफार नहुनु त्यही त होला भन्ने महसुस गर्ने ठाँउ रह्यो ।
विविध कारणले धेरै कामहरु गाउँपालिका अध्यक्षले मात्रै गर्न सम्भव नहुन पनि सक्छ । काम गर्दै जाँदा आन्तरिक रूपमा तपाईंलाई साथ सहयोग नभएको पनि हुनसक्छ तर, स्थानीय सरकार प्रमुख हैसियतले सबै कामको निगरानी, समन्वय, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिने जिम्मेवार भूमिकामा त तपाईं हुनुहुन्छ नि ?
त्यसैले मलाई लाग्छ बर्दगोरियामा पूर्वाधार बिकास भन्दा केही हिस्सा बजेट कला, संस्कृति, धार्मिक सम्पदा र पर्यटनका नाममा खर्च हुन्छ । यी योजनाहरु कतिसम्म दीर्घकालिन छन् भन्ने एक चाँसोको विषय हो । मेला, महोत्सवमा गरिने खर्चले कतिसम्म पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुन्छ र पर्यटन प्रवर्द्धन हुनसक्छ । ध्यान दिन जरुरी छ । नभए लाखौं बजेट बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । मेला, महोत्सवमा खर्च गर्नुभन्दा संरचना निर्माणमा केन्द्रित बनौं ।
अध्यक्ष ज्यु, । म केही अनुरोध गर्न चाहान्छु । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक सम्पदाको धनी मुलुक भएकाले यहाँको समाजमा, स्थानीय स्तरमा मानिसहरुले विभिन्न चाँडपर्व मनाउने गर्दछन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण चाँडपर्वका अवसरमा समुदायको मौलिक रीतिरिवाज झल्किने किसिमले शान्ति, सद्भाव, एकताको सन्देश दिने खालको जनतालाई सन्देश तथा शुभकामना प्रवाह गर्नुहोस् । सार्वजनिक सरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको बारेमा जनतालाई सुसूचित हुने खालका सूचना प्रवाह गर्नुहोस् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकामा गरेका निर्णय र नागरिकको हित हुने गरि सार्वजनिक प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुहोस् । प्रत्येक वडामा प्रहरी बिट स्थापना गरि शान्ति र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुहोस् । सामुदायिक बनमा हुने चोरी तस्करीका घटनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय र संस्थालाई जवाफदेहि बनाउने र प्रशासनलाई परिचालन गर्नुहोस् ।
हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानी, खेलकुद विकासमा स्थानीय सरकारले सम्बद्ध बौद्धिक तह र तप्काका प्रबुद्ध व्यक्तित्वसंग कतिपटक अन्तरक्रिया भए, गरेको छ । जनभेला गरि छलफल चलाइयो र रायसुझाव संकलन गरियो । यी विषय सरकार सञ्चालनका लागि सहयोगी र उपयुक्त हुन्छन् होला भन्ने लाग्छ ।
पछिल्लोपटक बर्दगोरियामा केही एजेन्डामा विवादास्पद देखियो । खानेपानी योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्न दुई-तीन पटक प्रयास गर्दा पनि गठन हुन सकेन किन ? यो एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास अन्तर्गतको योजना हो । यस्तो विषयमा जनप्रतिनिधि सबैको साझा भएर प्रस्तुत हुने र समाधानको निकासतर्फ जानुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा राजनीति असमझदारी बढेको र यही कारण हो भने यो उपयुक्त होइन । यसको निकास खोजिनुपर्छ र तत्काल विकास कार्य सुरु गरिनुपर्छ । कारण र समाधान खोजिनुपर्छ । यस्ता योजनाहरु रोकिनु हुँदैन । यो बजेट योजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ । वडास्तरमा रहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न केही योजनाका भवनहरु निर्माण भएसंगै हालसम्म प्रयोग बिहिन अवस्थामा छन् । यी योजनाको निरीक्षण भयो कि ? भएन ।
शिक्षाका सवालमा धेरै ढिलो गरि गठन भएको गाउँशिक्षा समितिले पहिलोपटक विद्यालय-विद्यालयमा गएर अनुगमन, निरीक्षण र सुझाव संकलन थाल्यो । तर, अहिलेसम्म विद्यालयका समस्या तिनै छन् । विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा प्रभावकारी छैन । पर्याप्त प्रयोगशाला छैन । पुस्तकालय छैन । बिज्ञान प्रयोगशाला छैन । उपलब्ध साधन, स्रोत भएका विद्यालयमा पनि कतिपय व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । प्रयोग बिहिन अवस्थामा छन् । शिक्षकले आचारसंहिता पालना नगर्नु, समय टार्नु, विद्यालयमा शिक्षकले राजनीति चर्चा गर्न बढीजसो अग्रसरता देखाउनु, विद्यालयको शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि वर्षेनी कमजोर नतिजा देखिनु यी समस्या यथावत् छन् ।
मैले सबै विद्यालयलाई भन्न खोजेको चाहिँ होइन । बर्दगोरियामा केही विद्यालय नमूना र उदाहरणीय रूपमा परिवर्तनतर्फ अग्रसर पनि छन् तर, प्रायःजसो यी समस्या यथावत छन् । पूर्वाधार पुगेका विद्यालयको स्तरउन्नति र बहुमुखी क्याम्पसको पहल गरौं । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुहोस् ।
गाउँपालिकाको गाउँपरिषदबाट अनुमोदन भएका पूर्वाधार विकास निर्माण योजनाहरु समयमै सम्झौता गरेर निर्माण गरिनुपर्यो । यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कतिपय बजेट योजनाहरु अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन भन्ने सुन्न आएको छ, यसमा के कसो भएको हो ? मलाई लाग्छ हाम्रो वडामा छनोट भएका ठूला प्रकृतिका बजेट योजनाको सुरुवात आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि सुरु भएको छैन । बजेट योजना सञ्चालनमा ढिलासुस्ती किन ? अध्यक्ष ज्यु । आर्थिक वर्षको बैशाख पछि सञ्चालन गरिने योजनाको निर्माण अवस्था कस्तो होला ?
तपाईं जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुको हिसाबले राम्रोसंग जानकार हुनुहुन्छ, होला । जनता जनार्दन, जनता सर्वोच्च र जनता नै शक्तिशाली हुन्छ,भनेर । जनताले कति विश्वास र भरोसा गरेर आफ्नो अमूल्य मत तपाईंलाई प्रदान गरेका हुन् । निर्वाचनको समयमा तपाईं जसरी गाउँघरमा जानुभयो र जुन कुरामा विश्वास दिलाएर जनताको अभिमत लिनुभयो । आज त्यो कुरा मानसपटलमा कतिसम्म राख्नुभएको छ ? या बिर्सनु भयो त्यो कुरा तपाईंलाई थाहा छ होला । देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहोस् । तपाईंको कार्यकालमा जनप्रिय, जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि पाएकोमा जनताले खुसीको अनुभूति गर्न सकुन् ।
हवस्त, अहिलेलाई निरन्तर रूपमा चलिरहेको कलमलाई यहीँ रोक्न चाहान्छु । तपाईंको कार्यकाल सफल रहोस्, शुभकामना सहित बिदा हुने अनुमति चाहान्छु । धन्यवाद !
बर्दगोरिया-३ खैरेनी, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल ।